DAAWO Video: Wajiga Ayuu Kaga Istaagay Lamana Ciqaabin - Jamaahiirta Chelsea Oo Ka Cadhooday Garsooreyaasha Kulankii Man City Ee Xalay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDAAWO Video: Wajiga Ayuu Kaga Istaagay Lamana Ciqaabin – Jamaahiirta Chelsea Oo Ka Cadhooday Garsooreyaasha Kulankii Man City Ee Xalay
DAAWO Video: Wajiga Ayuu Kaga Istaagay Lamana Ciqaabin – Jamaahiirta Chelsea Oo Ka Cadhooday Garsooreyaasha Kulankii Man City Ee Xalay
Xiddiga khadka dhexe uga ciyaara Manchester City ee Fernandinho ayaa ku kacay dhaqan-xumo kulankii xalay ay Chelsea kaga reebtay tartanka FA Cup oo marayey semi-final.
Man City iyo Chelsea ayaa semi-finalka FA Cup ku wada ciyaaray garoonka qaranka ee Wembley, waxaana 1-0 ay guushu ku raacay Chelsea oo u gudubtay finalka oo ay la ciyaaari doonto Southampton ama Leicester City oo maanta wada ciyaaraya midkooda soo gudba.
Intii ay socotay qaybta hore ee ciyaartii labadan kooxood, waxa dhacday arrin lama filaan ku noqotay jamaahiirta oo garsooraha dhexe ee Mike Dean iyo VAR aanu midkoodna dareen siinin.
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara City ee Fernandinho ayaa dhulka ku riday Mason Mount, waxaanu si badheedh ah ugaga istaagay wajiga sida ka muuqata Video-ga hoose.
Ferdandinho ayaan is aad ah ugu istaagin Mount, mana jirin wax dhaawac ah, laakiin in uu dhaco fal noocaas ah ayaa layaab ku noqday taageereyaasha iyadoo waliba uu garsooruhuna u dhowaa halka ay wax ka dhaceen.
Go’aanka garsooraha ee ahaa in ay ciyaartu socoto maadaama Chelsea ay kubadda haysato ayaa ahaa mid macquul ah, laakiin in Ferdinandinho lagu ciqaabo waayo ficilka uu sameeyey ayaa ahaa wax lala yaabay.
Chelsea ayaan wax cabasho ah ka muujin falkan, laakiin Mason Mount ayaa gacmaha kor ugu taagay garsooraha isagoo fadhiya, kana cabanaya waxa dhacay.
Laakiin garsoore Mike Dean ayaa u sheegay in faa’iidada ciyaarta ay wali haysato Chelsea oo ay kubadduna u socoto iyadoo waliba weerar ah.
Halkan ka daawo wixii dhacay: